Nahoana no mila mahazo backlinks mendrika kokoa ny masoivoho orinasa?
Misy fitsipika miorina amin'ny fitadiavana motera mikaroka izay milaza fa ny bikabikanao kokoa amin'ny pejy ao amin'ny tranonkalanao, ny tsara kokoa ny votoatinao dia hanana laharam-pahamehana amin'ny sehatr'asa momba ny orinasanao. Na dia izany aza, ny fahasamihafan'ny fananganana rohim-pifandraisana dia tsy mitovy amin'ny fandraharahana amin'ny orinasa ary ny fahombiazanao dia mila manana fomba fiasa mahagaga ho azy. Ohatra, ny fampielezan-kevitra miverimberina dia tsy mitovy amin'ny mpandraharaha ara-barotra.
Raha ny fitsipi-pitenenana dia mametraka ireto tetikady fototra ireto ny webmasters rehefa manomboka manatsara ny lozam-pifaneraserana hita ao amin'ny sehatra vao haingana: 1)
ny lahatsoratra momba ny tranokala vaovao sy ny fanavaozam-baovao ao amin'ny tambajotra sosialy;
mamorona rindranasa mankany amin'ny sehatra vaovao;
mitazam-pandroso amin'ny famoahana ny votoaty vaovao ao amin'ny blôginao.
Ireo rehetra voalaza etsy ambony dia hanome vokatra tsara ho anao raha mamerimberina mamerina azy ireo ho an'ny tranokalanao. Na izany aza, raha toa ianao ka manangan-tanana bebe kokoa amin'ny sehatry ny fikarohanao fitadiavana haingana kokoa, dia tokony hahazo famoronana bebe kokoa sy hampiasa teknikam-pamokarana mahomby.
Satria ny toeram-pivarotana fividianana trano dia heverina ho mpifaninana indrindra amin'ny tsenan'ny dizitaly, dia mety hanomboka amin'ny fifaninanana maro ianao. Mba hahazoana mangingina ny mpifaninana tsenanareo, dia mila mieritreritra am-pahamendrehana ianao ary mamorona rindran-damina amin'ny fomba mamitaka sy mamorona. Ny teboka dia tokony hojerena araka ny tokony ho izy ho an'ny motera sy ny mpampiasa. Mila manana tanjona manokana momba ny fanavaozana sy fanentanana fananganana rohy ianao. Raha tsy izany, dia hiafara amin'ny vokatra ratsy ianao. Tsy azo ampiasaina ho ny tanjona voalohany amin'ny fandraharahana ny laharana amin'ny TOP SERP. Fanambarana ankapobeny izany fa mety tsy hanome valiny mahasoa anao ny ankamaroany. Ilainao ny mizara ity hevitra goavana ity mankany amin'ireo drafitra tena misy sy azo tsapain-tanana toy ny fananganana rohy tsara na mamorona votoaty.
Raha ny tanjon'ny orinasa an-tserasera dia ny hiverenana rindran-damba, dia mila mametraka ity fanontaniana manaraka ity ianao:
Ahoana no mety ho fiantraikan'io backlink ny orinasan-sehatr'asa io?
Miverin-dàlana hijery ny organika amin'ny votoatiny, sa raha toa ka nividy ity rohy ity ho ana tanjona dokam-barotra aho?
Inona no teny fikarohana ataoko amina SERP?
Aiza ao amin'ny tranokalako no misy ny fandefasana mailaka alefaso?
Raha manana valiny marina momba ireo fanontaniana ireo ianao, dia afaka mandroso ary misafidy rindrambaiko mifandraika amin'ny rindrankajy mba hamokarana rindran-damina avo lenta hiverina any amin'ny faritra misy anao.
Ireto fomba manaraka ireto dia hanampy anao hamorona lamosina avo lenta eo amin'ny tranokalanao:
Mamoròna lahatsoratra amin'ny bolongana eo an-toerana
Ny iray amin'ireo fomba tranainy sy mahazatra ahafahana mahazo ny kalitao sy ny rindran-damosina dia ny manasongadina ireo hafatra ho an'ny bilaogy hafa mifandraika amin'ny niche. Tsy midika akory izany fa tokony hikaroka blaogy momba ny trano fonenana ianao, ary azonao atao ihany koa ny manoratra vaovao tsara momba ireo blaogin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana, ireo sehatra vaovao ao an-tanàna ary ny sisa. Rehefa manomboka manangana backlinks kalitao miverina any amin'ny tranokalanao avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka ianao, hahazoanao fahefana bebe kokoa avy amin'ny Google ny tranonkalanao ary mahazo toerana ambony kokoa ao amin'ny SERP.
Zarao ny votoatin'ny blôgy misy anao ao amin'ny tranokala hafa
Ny fomba iray ahafahana manana backlinks avo lenta maro dia ny manamarina ny votoatinao amin'ny tranonkala famoaham-peo samihafa. Azonao atao ny manova ny votoatiny amin'ny fanovana ny format. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny lahatsoratra bilaoginao rehetra dia tokony arahina amin'ny alàlan'ny fanonganam-panidinana, fampisehoana, lahatsary YouTube na fivoriana mivantana amin'ny Facebook. Azonao atao ny mametraka ireo votoaty samihafa isan-karazany ao amin'ny tambajotra sosialinao rehetra ary manintona kokoa ireo mpampiasa azy amin'izany Source .